नर्भिकको भीआइपी कोठाबाट महरा कुन रोगको उपचार गराईरहेका थिए ? | Citizen Post News
काठमाडौं । संसद सचिवालयमा कार्यरत पीडित भनिएकी महिला कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कारको प्रयास तथा कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको आज थुनछेक बहस हुँदैछ । अभियुक्त महराले गत शुक्रबार ७ घण्टा लामो बयान दिएका थिए भने उनको बयान लामो भएका कारण थुनछेक बहस हुन सकेको थिएन ।
गत असोज १२ गते पीडित शाहीमाथि महराले बलात्कारको प्रयास तथा कुटपिट गरेको घटनाको खबर पहिलो पटक हाम्राकुरामार्फत त्यसको भोलीपल्ट अर्थात १३ गते प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको भोलीपल्ट विहानै नेकपाको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बैठकले महरालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएलगत्तै उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा किस्ताबन्दीमा दिएका थिए । यद्यपि उनले सांसद पदबाट भने अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन् ।
राजीनामा दिएको केही दिन पछि पीडित रोशनीले महराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । त्यसपछि अभियुक्त महरालाई प्रहरीले असोज १९ गते साँझ बालुवाटारस्थित उनको सरकारी निवासमै पुगेर पक्राउ गरेको थियो । शाहीले आफूमाथि भएको बलात्कारको प्रयास तथा कुटपिट बारेमा अडियो भिडियोसहित बयान दिएर समाचार सार्वजनिक भएता पनि उनले दबाबमा परेर रातारात बयान परिवर्तन गरेकी थिइन ।
पछिल्लो समय पनि उनी महरा निर्दोष रहेको भन्दै निवेदन नै लिएर अदालतसम्म पुगेकी थिइन ।आज हुने बहसपछि सवुत तथा प्रमाणका आधारमा अभियुक्त महरा धरौटी वा साधारण तारेख छुट्ने या पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने भन्ने निक्यौल गर्नेछ । महरा पक्राउ परेलगत्तै एक्कासी स्वास्थ्य समस्या भएको भन्दै नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
उनलाई अहिलेसम्म पनि उपचारको नाममा नर्भिक अस्पतालको उच्च सेवा सुविधायुक्त भीआइपी क्याबिनमा राखिएको छ । यद्यपि महरा के का विरामी हुन् ? त्यहाँ बसेर कुन रोगको उपचार गराइरहेका थिए ? अहिलेसम्म खुलेको छैन । तर अदालतमा देखिँदा महरा ठिकठाक देखिन्छन् । यो हिसाबमा उनले पदमा नहुँदा समेत कानुनको दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।